Himalaya Dainik » पैसाबारे दम्पती र साथीबीच यस कारण विवाद हुन्छ
पैसाबारे दम्पती र साथीबीच यस कारण विवाद हुन्छ
के तपाईँले पैसाको विषयमा आफ्नो जीवनसाथीसँग विवाद गर्नु भएको छ? परिवारका अन्य सदस्य वा साथीहरूसँग नि?
हामी पैसा बारे कुराकानी गर्न रुचाउँदैनौँ; यसो गर्नु अप्ठयारो वा अप्रिय लाग्नसक्छ। कसैका लागि यो अभद्र पनि हुनसक्छ। तर यस्तो हुँदाहुँदै पनि पैसाबारेको कुराकानीबाट सधैँ तर्किन सकिँदैन। र यसको कुराकानीको अन्त्य सधैँ राम्रो हुँदैन।
हालै ब्रिटेनमा गरिएको एउटा अध्ययनका अनुसार सम्बन्धमा समस्या ल्याउने प्रमुख स्रोत मध्ये एक पैसा हो र यसको असर दम्पतीमा मात्र सीमित हुँदैन। यो परिवारका सदस्य र साथीसँगीसँग हुने समस्याको समेत कारण हो। र यस्तो अवस्थाको समाधान भनेको कुराकानी र पैसाबारे इमानदारी र खुला छलफल हो।
तपाईँका लागि बाल्यकालमा पैसा सधैँ अपुग हुन्थ्यो भने तपाईँ निकै खर्चालु व्यक्ति बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । मानिसहरूबीच पैसाको विषयमा वि वाद उत्पन्न हुनुको एउटा प्रमुख कारण भनेको यसको विषयमा उनीहरूको फरक दृष्टिकोण हो।
त्यस्तो दृष्टिकोणको निर्माण बाल्यकालदेखि नै हुन्छ जुन घरेलु वातावरण र अनुभवबाट सिर्जित हुन्छ। तर यसको अर्थ तपाईँले सधैँ आफ्ना अभिभावकको सिको गर्नुहुन्छ भन्ने भने होइन।
उदाहरणका लागी तपाईँका लागि बाल्यकालमा पैसा सधैँ अपुग हुन्थ्यो भने पछि गएर तपाईँ निकै खर्चालु व्यक्ति बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र हामी पैसालाई यसको लेनदेनसँग सम्बन्धित सुविधाभन्दा माथि राखेर यसलाई अर्थपूर्ण बनाउँछौँ।
हामी मध्ये केहीका लागि पैसाले सुरक्षा प्रदान गर्छ भने केहीका लागि यसले स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ। अन्य केहीका हकमा भने यसले हैसियत र शक्तिको प्रत्याभूति दिलाउँछ।
यसै कारण पैसासँगको हाम्रो सम्बन्ध जटिल हुन्छ र यसको छाप गहिरो हुन्छ। र त्यसले पैसाबारे फरक धारणा राख्ने मानिससँग भेट हुँदा निराशा उत्पन्न गराउन सक्छ।
तपाईँ आफ्ना साथीसँगीले नयाँ लुगा वा रात्रिकालीन मनोरञ्जनमा पैसा खर्च गरेको नरुचाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको साथीसँगी भने पैसाबारे तपाईँको सोच साँघुरो हुन नहुने र कहिलेकाहीँ मनग्य खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हुन सक्छ।